Wararka – Page 28 – Radio Simba 95.0 MHZ – Simbanews – Idaacada Simba
Raisulwaaare Kheyre oo Sheegay Inuusan Jirin Ciidan uu Mushaar Ka Maqan Yahay,
Raisulwasaaraha Xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa ka hadlay cabashadda kasoo yeertay Ciidamadda Dowladda Soomaaliya ee ku aadan in aysan afar bilood qaadanin wax mushaar ah. Kheyre oo kulan la qaatay Saraakiisha kala duwan ee Dowladda soomaaliya iyo maamulka gobolka banaadir ayaa sheegay inuusan jirin Ciidan uu Mushaar ka maqan yahay, kuwa aan la diiwaangelin mooyee. Sidoo kale waxa ...
Wararka ka imaanaya Degmadda Balcad ee Gobolka Shabeelaha Dhexe ayaa ku waramaya in Ciidamadda Dowladda Soomaaliya ay dib ula wareegeen Degmadda, kadib markii ay isaga baxeyn dagaalyahanadda Xarakadda Al-shabaab. Al-shabaab ayaa xalay degmadda ka weeraray Saddex jiho oo kala ah laba wado oo jaay ah kana timaada dhinaca degmada Afgooye iyo wada ka timaada dhinaca degmada Jowhar halkaas oo fariisin ...
Dhageystayaal kusoo Dhawaada Warka Subax Radio Simba ee Magaaladda Muqdisho waana Subaxnimo Talaado ah Tariikhdana ay ku beegan Tahay 19-01. 2019
Al-shabaab Oo Caawa La Wareegay Qeybo Ka Mid Degmada Balcad
Ciidanka ka tirsan Al-shabaab ayaa Caawa gudaha ugalay Degmada Balcad ee Gobalka Shabeelaha Dhee ka dib weerar ay Degmada uga soo qaadeen dhowr jiho. dadka Magaalada ayaa caawa hurdada uga soo toosay dhawaaqa rasaasta culus oo ka socto gudaha degmada Balcad islamarkaan is weydaarsanayaa Ciidamada Dowladda Soomaaliya iyo Al-shabaab. Mas’uuliyiinta Maamulka Degmada Balcad ayaa Xaqiijiyey Weerarkaan caawa waxaana ay sheegeen inay wali ...
Wararkii Ugu Dambeeyay Toogashadii Ka Dhacday Utrecht Neteherland+Sawirro
Nin hubeysan ayaa rasaas oodda kaga qaaday xaruun tareennadavlaga raaco oo ku taallo magaalada Utrecht ee dalka Neteherland. Warar ka imanaya magaalada uu weerarka ka dhacay ayaa waxay sheegayaan in hal qof uu ku dhintay iyada oo qaar kalana ay ku dhaawacmeen. Goobta uu weerarka ka dhacay waxaa la geeyey ciidamo tira badan. Booliska ayaa ku baaqay iney ka fogaadaan ...
Faah-faahino dheeraad ah ayaa kasoo baxaya Qarax Gaari lagu xiray oo goordhaweyd ka dhacay Magaaladda Muqdisho ee Caasimadda Soomaaliya. Qaraxaan ayaa ka dhacay Dhabarka dambe, Hoteelka wehliye Degmadda Howlwadaag ee Gobolka Banaadir. Sida ay inoo xaqiijiyeen goobjoogayaal deb ka kacay gaariga markuu qarxay kadib ayaa sidoo kale sababay in uu gubto guri gaariga uu hor yaalay. ilaa hataan lama oga ...
Wasiirka Wasaaradda Gaadiidka Cirka iyo dhulka ee dowladd Goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Xasan Xuseen Maxamed(Xasan Eeleey), ayaa xilkii ka qaaday Maareeyihii Garoonka diyaaradaha Degmada Baraawe Cabdullaahi Xuseen Cusmaan. Qoraal kasoo baxay Xafiiska Wasiirka ayaa lagu cadeeyay oo kaliyah xil ka qaadis,balse lama shaacin wax magacaabis ah.
Warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya dagaal u dhaxeeya laba maleeshiyo beeleed oo xalay ilaa saakay ka socda Deegaanka Xiraale ee Gobolka Galgaduud. Dagaalkaan ayaa u dhaxeeya Ciidamadii Ahlusuna ee ku biiray Maamulka Galmudug iyo maleeshiyaad ku sugnaa mudooyinkii dambe deegaanka Xeraale. Sida ay inoo xaqiijiyeen dadka deegaanka Ciidamadii ahlusuna ee ku biiray Galmudug ayaa dagaalka kusoo qaaday deegaanka,dagaalka ayaa ...
Askari ka tiran Ciidamadda booliska Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa Isgoyska Taleex Degmadda Hodan ee magaaladda muqdisho waxa uu shalay ku dilay Wiil dhalinyaro ahaa oo Bajaaj waday. Wiilka la dilay ayaa lagu magacaabi jirey Cabdi Waaxid Jibriil Afrax wuxuu ahaa wiil dhalinyaro ahaa oo hadda nolosha dunida u soo iftiimeysay, islamarkaana sidoo kale ahaa ardey wax ka barta Jaamacadda Soomaliya. ...
Page 28 of 1,771« First...1020«2627282930 » 405060...Last »